Ifektri yezixhobo zoMayeza | I-China Abavelisi bezixhobo zeMachiza nabaXhasi
I-WAS Series Ampoule Sterilizer yaManzi
Njengokuphela kweliziko le-R & D lesizwe sokucocwa kweentsholongwane kunye nezixhobo zokubulala iintsholongwane, i-SHINVA yeyona nto iphambili kuyilo lomgangatho wesizwe kunye noweshishini kwizixhobo zokucoca. Ngoku i-SHINVA sisiseko esikhulu sokuvelisa inzalo kunye nezixhobo zokubulala iintsholongwane kwihlabathi. I-SHINVA idlulile ukuqinisekiswa kwe-ISO9001, i-CE, i-ASME kunye nenkqubo yolawulo lweenqanawa.
RXY Series Hlamba-Coca-Gcwalisa-iTywina Line
I-Vial Wash-Dry-Fill-Seal Production Line isetyenziselwa ukuhlamba, ukucoca inzalo, ukugcwalisa nokutywina inaliti encinci yevolumu kwi-workshop. Inika uyilo oluphambili, ulwakhiwo olufanelekileyo, inqanaba eliphezulu lokuzenzekelayo, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo, ukusebenza kakuhle kwemveliso kunye nokudityaniswa komatshini kunye nombane. Iinxalenye ekunxibelelaniswe nolwelo lweziyobisi zenziwe nge-AISI316L kwaye enye yenziwe nge-AISI304. Izinto ezisetyenzisiweyo azinangcoliseko kwiziyobisi nakwimo engqongileyo.
I-PSMR Series iSterilizer yamanzi eshushu ngokufudumeleyo
Izinto ezifanelekileyo: Ingcali yokusebenza kwerobhothi
Uluhlu lwe-RXY yeFom-Gcwalisa-iTywina Line
Umgca we-non-PVC we-bag-fill-seal line (FFS Line) ubunjwe yicandelo elenza ibhegi, isikhululo sokutywina, ikhabhinethi yolawulo kunye ne-laminar flew hood. Umatshini wokugcwalisa uMatshini wokuTywina u-PVC Itshathi yokuhamba ngolu hlobo lulandelayo: Ukuprinta kwifilimu → Ukwenza ibhegi → Ukuwelda izibuko → Ukudlulisa ingxowa → ukugcwalisa → Ukutywina ingxowa
ECOJET Series Inaliti yokubumba & inkqubo Blowing
Umatshini ubukhulu becala usetyenziselwa ukwenza ibhotile engenanto kwi-granule ye-PP. Kuquka Inaliti Ukubumbela Matshini kunye Bottle oMayo Machine.
Uthotho lwe-SSL yokuGcwalisa-ukugcwalisa iTywina kumatshini
Umatshini usetyenziselwa ikakhulu ukuhlamba, ukuzalisa kunye nokutywina i-PP ukumnika ibhotile. Kufanelekile ukutywina okushushu kwekepusi edibeneyo, kubandakanya iyunithi yokuhlamba umoya ye-ion, iyunithi yokuhlamba i-WFI, iyunithi yokugcwalisa uxinzelelo lwexesha, iyunithi yokutywina / iyunithi yokufaka.
I-PSMP Series iSterilizer yamanzi eshushu ngokufudumeleyo
Inkqubo yeGP yokuZenzekelayo
Inkqubo ezenzekelayo idityaniswe nothutho oluzenzekelayo kunye nokulayishwa okuzenzekelayo kweentlobo ezahlukeneyo zokumiliselwa, itreyi yothutho oluzenzekelayo kunye nokothula ngokuzenzekelayo emva kokucoca inzalo, esisizalo sakutsha nje sezixhobo zamayeza.
Umatshini wePBM Series BFS
Umatshini weplastikhi wokugcwalisa itywina lebhotile yeplastikhi yamkela itywina lokugcwalisa (emva koko i-BFS) itekhnoloji edibeneyo, eyinkqubo yemveliso yokuveliswa kokufakwa kweplastiki. Umatshini wokugcwalisa i-aseptic kathathu-inye isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yokupakisha yeplastikhi yenzalo yesiphelo, iimveliso ze-aseptic, njl. Ayilungelanga kuphela imveliso yobuninzi beemveliso, kodwa ikwanokuzinza okuhle kwe-aseptic, ukungangcoliseki okuphantsi , Ixabiso eliphantsi lemveliso kunye nolawulo.
Njengokuphela kweliziko le-R & D lesizwe sokucocwa kweentsholongwane kunye nezixhobo zokubulala iintsholongwane, i-SHINVA yeyona nto iphambili kuyilo lomgangatho wesizwe kunye noweshishini kwizixhobo zokubulala iintsholongwane. Ngoku i-SHINVA sisiseko esikhulu sokwenza izixhobo zokubulala iintsholongwane kunye nezixhobo zokubulala iintsholongwane kwihlabathi. I-SHINVA idlulile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001, i-CE, i-ASME kunye nenkqubo yolawulo lweenqanawa.
I-SGL uthotho jikelele lwe-sterilizer ye-steam iyazifezekisa ngokupheleleyo iimfuno ze-GMP kwaye isetyenziswa ngokubanzi ekucoceni izixhobo, iimpahla ezingavaliyo, izithinteli zerabha, iminqwazi yealuminium, izinto eziluhlaza, amacebo okucoca kunye nenkcubeko kwindawo yobunjineli bamayeza, ukhathalelo lonyango kunye nolwezempilo, isilwanyana ilabhoratri njalo njalo.
Inkqubo yokuZenzekelayo ye-GR
Inkqubo ye-BZ Series Package ezenzekelayo
Inkqubo yephakheji ezenzekelayo idityaniswe nokuhlolwa kokukhanya okuzenzekelayo, ikhatoni ezenzekelayo kunye nokufaka okuzenzekelayo kweentlobo ezahlukeneyo zokumiliselwa, esisizukulwana sakutsha nje sezixhobo zamayeza. Ukusetyenziswa kwale nkqubo akupheleli nje ekunciphiseni ubungakanani babasebenzi ukunciphisa amandla emisebenzi, kodwa kunye nokuphucula inqanaba lokuzenzekelayo lezixhobo zokuvelisa isisombululo se-IV ukuphucula umfanekiso wonke wenkampani yamayeza.